Xiddiga reer Algeria Riyad Mehrez oo laga dhacay gurigiisa alaabooyin lagu qiimeeyey qiyaastii… – Hagaag.com
Posted on 31 Maajo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Guriga xiddiga reer Algeria Riyad Mahrez oo Man City garabka uga ciyaara ayaa la kulmay xatooyo Jimcihii la soo dhaafay. Qiimaha alaabooyinka laga xaday ayaa lagu qiyaasay 555,000 euro, oo ay kujirto 339,000 euro qiimaha sedex saacad oo kuwa gacanta ah, sida laga soo xigtay joornaalka Ingiriiska “Sun”.
Tuugada ayaa xoog ku galay hoyga raaxada ee Mehrez waxayna ku guuleysteen inay xadaan saacadaha qiimaha leh, oo qiimahoodu kala ahaa 256 kun oo euro, 44 ​​kun euro iyo 39 kun euro, iyo qiyaastii 55 kun oo lacag kaash ah iyo jijimo dahab ah iyo waliba funaanado isboorti oo naadir ah oo qiimahooda gaarayaa 167 kun euro.
Sida laga soo xigtay wargeyska Ingiriiska, tuugada ayaa si taxaddar leh ula socdeen dhaqdhaqaaqa Mehrez ka hor inta aysan u dhicin gurigiisa ku yaal bartamaha magaalada Manchester.
Afhayeen u hadashay booliska magaalada ayaa xaqiijisay dhacdada, waxayna tiri, “Jimcihii saacadu markay ahayd 5-tii galabnimo (GMT), booliisku waxay diiwaan geliyeen afar diiwaan oo howlgalo tuugo ah oo lagu jabsaday guryo ku yaala bartamaha Manchester.”
Kooxda Manchester City kama aysan hadlin weli xatooyadaas.
Waxaa xusid mudan in dhacdadani ay qayb ka tahay dhacdooyin taxane ah oo saameysay ciyaartoy badan oo kubada cagta ah oo ka ciyaara Horyaalka Ingiriiska, waxaana ka mid ah xiddiga Tottenham Dele Alli, kaasoo gurigiisa la dhacay labo isbuuc ka hor.
Alli ayaa waxaa lagu haystay gudaha gurigiisa oo wuxuu ku noolaa daqiiqado argagax leh kadib markii ay ugu hanjabeen tuugada mindi ka hor inta aysan xadin saacadaha iyo dahabka, oo ay kujirtay saacad lagu qiimeeyay 256 kun oo euro (oo la mid ah tan laga xaday guriga Mehrez) kadibna cararay .